Global Voices teny Malagasy » Ny Tanjon’ny Mpaka Sary Iray Mba Hanova Ny Fomba Fijerin’ny Olona Ireo Sisa Tsy Matin’ny Dotra · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny Tanjon’ny Mpaka Sary Iray Mba Hanova Ny Fomba Fijerin’ny Olona Ireo Sisa Tsy Matin'ny Dotra
Voadika ny 12 Jolay 2016 17:37 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika miora
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Hevitra, Mediam-bahoaka, Saripika, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Sita Bhandari, fehinkibo mainty amin'ny taekwondo, nahazo medaly ho an'ny firenena. Avy amin'i Arjun Shah ny sary rehetra. Nampiasàna fahazoandàlana.
Misy fotoana tsy hay fafàna eo amin'ny fiainana, na ho an'ny tsara na ho an'ny ratsy. Latsa-paka ao am-ponao izany — ary indraindray eny amin'ny hoditrao ihany koa. Toy izany ny tranga ho an'ireo sisa tsy matin'ny dotra.
Arjun Shah , mpaka sary iray momba ny dokambarotra sy ny lamaody, dia nanana aingam-panahy hanomboka ny fanentanana mba hanova ny fomba fijerin'ny olona ireo sisa tsy matin'ny dotra, ary manao izay ahazoan'izy ireo mandray ny fahamendrehana sahaza azy. Avy any Chitwan i Arjun, tany lemaka any Nepal atsimo. Ekena ho iray amin'ireo mpakasary voalohany amin’ny mpiray taona aminy izy, nasongadina tao amin'ny gazetiboky iraisam-pirenena iray malaza miresaka momba ny fomba fiaina ny asany . Ankoatr'izany, nanatontosa dokambarotra miavaka maro ho an'ny marika iraisam-pirenena sy ao an-toerana nandritra ny 12 taona mahery izy amin’izany sehatra izany.
Nanomboka naka sary an’i Jayatri Tamang  izy, iray sisam-paty tamin’ny dotra, ho an’ny fonon’ny gazetiboky iray momba ny fialambolim-bahoaka. Lafo avokoa ireo gazetiboky ary lasa modely amin’ny fandraisana anjara i Jayatri. Tamin'ity taona ity, miverina miaraka amin'ny ekipa vehivavy be herim-po izy, sisa tsy matin'ny dotra avokoa ireo, izay aseho ao amin'ny pejy malamalama amin’ny kalandrie izay notontosainy.
Niresaka tamin'i Arjun ny Global Voices momba ny antony nanosika azy, ny fiantraikan'ny asa teo aminy ary ny finiavany hanova ny fomba fijerin’ny fiaraha-monina manoloana ireo sisa tsy maty.
Global Voices (GV): Nilaza ianao fa ny hevitry ny kalandrienao izay mampiseho sisa tsy matin'ny dotra dia notorontoronina nandritra ny fandehananao tamin'ny fiara fitateram-bahoaka iray? Afaka manome kely antsipirihany amin’izany ve ianao?
Arjun Shah (AS): Tao anaty fiara fitateram-bahoaka aho no nisy vondrona ankizilahy sy ankizivavy nanomboka nihomehy vehivavy iray izay manarona ny tarehiny amin'ny “châle”. Sisa tsy matin'ny dotra izy io. Raha nijery ny fihetsik’izy ireo, tsy ho an'ilay sisa tsy maty no tsapako fa ho an’ireo tanora.
Rehefa nilaza aho fa mety hahazo ny olona rehetra ny tranga sy loza toy izany, dia nihomehy izy ireo ary namaly ny zazavavy iray hoe, “Aleo maty toy izay ho velona miaina toy izany.”
Avy eo nidina tampoka tamin'ny toeram-piatoana manaraka ilay ankizivavy. Fa nahatonga ahy nieritreritra ny karazana fanabeazana lalovan’ny tanora ilay izy. Noresahako tamin'ny namako sasany sy ny rahalahiko izany, nefa tsy afaka nampionona ny alahelo tao anatiko izany.
Toy izany no nanombohan’ny fikatsahana hanova io fomba fijery io. Naniry hanao zavatra izay mety hanova io hevitra io aho.
Nifandrindra tamin'ny sisa tsy maty iray tamin'ny dotra i Arjun Shah talohan'ny fakàna sary.
GV: Ahoana no nahafahanao nahazo ireo sisa tsy matin'ny dotra naseho tao amin'ny fanentanana nataonao? Sarotra ve ny nandresy lahatra azy ireo?
AS: Taorian’izany zava-nitranga izany, nandeha tany amin’ny gazetiboky aho ary nanolo-kevitra ny hanasongadinana sisa tsy maty iray tamin’ny dotra, nefa tsy nisy nanohana tamin'ny voalohany. Ary tamin’ny farany, nanaiky ilay sosokevitra ny gazetiboky WAVE.
Soa ihany fa nihaona tamin'i Dr. Jaswan Shakya avy amin’ny Sushma Koirala Memorial Hospital aho izay nanasa ahy ho any amin'ny hopitaliny. Avy eo nihaona tamin'i Jayatri Tamang aho, mpiady voalohany, sisa tsy maty ary mahery fon’ny fanentanako.
Afaka enim-bolana izy vao nanapa-kevitra ny ho apetraka amin'ny fonon’ilay gazetiboky.
Niahiahy izy nandritra ny fakàna sary raha nahita ireo ekipa marobe, fa rehefa afaka andro vitsy, vonona hanaraka izy. Ary dia tantara ny sisa.
Lafo namidy avokoa ireo gazetiboky.
Jayatari Tamang no voalohany sisa tsy matin'ny dotra niseho tao amin'ny fonon'ilay gazetiboky tao Nepal.
GV: Inona no hevi-dehibe tamin’ny fakàna sary an’i Jayatri ho amin'ny fonon’ny gazetiboky?
AS: Nahazo lesona manandanja roa aho:
Tsy tia fitserana [ny sisa tsy matin'ny dotra].
Aza mametra-panontaniana momba ny lasany.
Taorian'ny fametrahana ny fonon’ny gazetiboky, nisy fiovana be teo amin’i Jayatri. Matoky tena kokoa izy, ary ankehitriny dia manana toe-tsaina mpitarika., Mieritreritra aho fa nanao zavatra tsara, rehefa nahita izany.
Tsy manafina ny tavany izy. Hitako izany fiovana izany.
Tsy mitsahatra manonofy mihitsy i Renuka Shrestha.
GV: Ahoana no nahitanao ireo vehivavy hafa ho an’ilay kalandrie? Sarotra ve izany?
AS: Nitondra andiana aingam-panahy ho an'ny zazavavy mitovy aminy i Jayatri. Nitsiriritra azy ary naniry ny hiseho amin'ny media ihany koa izy ireo.
Nihevitra ny hanao kalendrie ho an’ireo sisa tsy matin'ny dotra aho, nefa ny drafitra nataoko dia nipirina satria tsy fantatro hoe aiza no ahitana ireo sisa tsy maty.
Ramatoa iray antsoina hoe Radha Shrestha no nahafahana nanao izany. Nanana sisa tsy maty 7-8 nifandray taminy izy. Nolazaiko izy ireo mba hiresaka amin’i Jayatri alohan'ny fiomanana amin’ny fakàna sary.
Zava-dehibe tamin'ny fanangonana ireo vehivavy ho an'ny saripika ny anjara asan'i Radha Shrestha.
GV: Tamin’ireo vehivavy rehetra nasongadina tao amin'ny kalandrienao, iza no tena nanome aingam-panahy ho anao ary nahoana?
AS: Ho ahy, manome aingam-panahy daholo izy rehetra. Tsy niharam-boina izy ireo. Sisa tsy maty izy ireo. Mpiady. Ara-bakiteny, faly izy ireo. Tsy azonareo an-tsaina ny fahafinaretana ananan’izy ireo.
Olona mahavariana izy ireo. Nahazo aingam-panahy aho. Nahoana aho no tsy afaka ho tahaka azy ireo?
Tsy voaelingelin'ny lasany intsony i Sunita Maharjan.
GV: Efa nanao fakàna sary momba ny lamaody nandritra ny fotoana ela ianao. Inona no maha samihafa ity fahatsapàna ity?
AS: Ho ahy tsy misy maha samihafa ny modely manintona sy ny sisa tsy matin'ny dotra. Tsy misy maha samihafa azy mihitsy.
Na izany aza, satria ny sary nataoko milaza ny tantara, mila mitandrina kokoa amin'izy ireo aho.
Ireo fotoana sambatra fotsiny no iako horaketina. Ny lafiny mamirapiratra eo amin'ny fiainan'izy ireo ihany.
Manana tantara ho lazaina i Rasta Khadgi.
GV: Fahombiazana manao ahoana no heverinao fa azo tamin'ny fanentanana nataonao?
AS: Heveriko fa nahavita amin’ny ampahany ny nampita hafatra ho an’ny tanora aho, indrindra, ho an'ireo izay mihevitra fa tsy misy eo amin'ny fiarahamonina [ny sisa tsy matin'ny dotra].
Mety hitranga amin'ny olona rehetra izany. Na izaho sy ianao aza. Te hanome azy ireo io hafatra io aho.
Tapa-kevitra ny hanatratra ny tanjony i Simran KC.
GV: Azonao lazaina anay ve ny drafitrao amin'ny hoavy?
AS: Nieritreritra ny hanao horonantsary fohy momba ny fiainan’izy ireo tsirairay aho. Toy ny hoe “Indray andro teo amin'ny fiainan’i… ”
Ny ampahany betsaka tamin'ilay fivarotana  ny kalandrie dia alefa any amin’ny tanjona izay manampy ireo mararin’ny dotra ho fitsaboana ao amin’ny Sushma Sushma Koirala Memorial Hospital, any Nepal.
Lazaiko fa aza manome vola azy ireo, aza mitsetra azy ireo. Omeo toerana izy ireo. Mba hanaovany zavatra amin’ny nahim-pony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/12/84228/
 Arjun Shah: https://www.facebook.com/arjun.shah.56863?fref=ts
 ny asany: https://www.facebook.com/ArjunShahOfficial/
 Jayatri Tamang: http://blog.glamournepal.net/en/images/329/